Remarks by Mr. Knut Ostby, United Nations Resident and Humanitarian Coordinator in Myanmar Nay Pyi Taw, 11 July 2019 | UNIC Yangon
Remarks by Mr. Knut Ostby, United Nations Resident and Humanitarian Coordinator in Myanmar Nay Pyi Taw, 11 July 2019
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့လူဦးရေနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူး မစ္စတာကနွတ်အော့စ်ဘီ ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း
နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်
ဆောင်ပုဒ် – “ကတိကဝတ်များကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖြည့်ဆည်းလို့ ၂၅ နှစ်မြောက် ICPD ကို ဂုဏ်ပြုစို့”
လေးစားအပ်ပါသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ၊
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊
UNFPA ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာရာမန်နေသန်ဘာလာခရစ်ရ်ှနန်၊
ကနေ့ ကျင်းပတဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့လူဦးရေနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားမှာ အားလုံးနဲ့အတူ တက်ရောက် ဆင်နွှဲခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ပဲ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ယခုနှစ် ကမ္ဘာ့လူဦးရေနေ့ရဲ့ အရေးကြီးလှတဲ့ ဆောင်ပုဒ် ကတော့ “ကတိကဝတ်များကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖြည့်ဆည်းလို့ ၂၅ နှစ်မြောက် ICPD ကို ဂုဏ်ပြုစို့” ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အီဂျစ်နိုင်ငံ၊ ကိုင်ရိုမြို့က အစပြုတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တော်လှန်ရေးကြီးမှာ ပါဝင်လက်တွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် ၁၇၉ ဦးဟာ လူဦးရေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာညီလာခံ ICPD ကြီးမှာ စုဝေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီး လွတ်လပ်တဲ့၊ တာဝန်သိတဲ့ မျိုးဆက်ပွားခြင်း ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်မှုတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဟာ လူတိုင်း ရရှိခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အသိ အမှတ်ပြုခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီညီလာခံကြီးမှာ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင် ရေး၊ ရပိုင်ခွင့်များ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးတို့ဟာ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တစ်ခုကို ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒုတိယသမ္မတနဲ့တကွ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်းများခင်ဗျာ၊ အရေးပါလှတဲ့ ပြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ICPD သဘောတူညီချက်ဟာ အစိုးရများနဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင် မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းမှာ ပထဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ICPD ဟာ လူဦးရေဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်တွေကနေ လူသားတွေ ရဲ့ဘဝအတွက် ဦးတည်ချက်ကို ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ မိသားစုစီမံကိန်းအကောင်းအထည်ဖော်ရေး၊ မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေကို အားလုံးလက်လှမ်းမီရရှိရေးအတွက် ဆောက်ရွက်ရန် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များက ကတိက၀တ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ မိခင်သေဆုံးမှု လျှော့ချဖို့ သန္နိဋ္ဌာန်ချခဲ့ကြပြီး ကျားမအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုကို အဆုံးသတ်ဖို့လည်း ကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ခေါင်းဆောင်တွေက အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုဟာ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက် တစ်ရပ်အဖြစ်လည်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပြီး အစိုးရတွေကို လူငယ်များအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေ၊ နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းရသူတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ လူဦးရေဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့လည်း ကတိပြုခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ICPD ကနေ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြခဲ့တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လူသားဗဟိုပြုနည်းလမ်းဟာ နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ ထောင်စုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်များ (MDGs) နဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင် များ (SDGs) အပါအဝင် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း ဆက်လက်ကျင့်သုံးလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်းများခင်ဗျာ၊ ICPD လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်တွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အပြန်အလှန်အားပေးထောက်ပံ့နေတဲ့ အစီအစဉ်နှစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိပြုမိကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ခန့်က ဒိန်းမတ်အိမ်ရှေ့စံ ပြောခဲ့သလို ပါပဲ “ICPD ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ရပိုင်ခွင့်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်မှာ ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ ချမှတ်ထားတဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုပန်းတိုင်တွေကို ပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး၊ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနဲ့ ကျားမတန်းတူညီမျှမှုတွေအားလုံးဟာ မရှိမဖြစ်အရေးပါလှပါတယ်။”
ဒီနှစ်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်အရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအသီးသီး မှာ ICPD ပန်းတိုင်တွေ ပြည့်မြောက်စေဖို့ အစိုးရနဲ့တကွ ကျွန်တော်တို့တတွေအားလုံး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကနေ ရရှိလာတဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို စာရင်းပြုစုမှတ် တမ်းတင်နိုင်မယ့် တမူထူးခြားတဲ့ အခွင့်အရေးကို ရရှိစေပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ၁၉၉၄ ခုနှစ်က ကတိပြုခဲ့ကြတဲ့ အတိုင်း လူသားအားလုံး ရပိုင်ခွင့်တွေ ရရှိခံစားနိုင်အောင်၊ ရွေးချယ်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်အောင်၊ ICPD လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ အပြည့်အဝနှစ်မြှုပ်အားထုတ်ပြီး အရှိန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ဖို့ ကျွန်တော်အားလုံးကို ဒီဆောင်ပုဒ်က စိန်ခေါ်နေပါတယ်။ ၂၀၃၀ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ချမှတ်ထားတဲ့ ဘယ်သူမှ နောက်မကျန်ခဲ့စေရ၊ နောက်အကျဆုံး ကျန်ခဲ့သူတွေဆီ အရောက်ကမ်းလင့်ကြမယ်ဆိုတဲ့ ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတွေ ပြည့်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဧည့်သည်တော်ကြီးများခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီအခမ်းအနားကနေ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရော၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ ICPD အတွက် စီမံပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ UNFPA ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို အသိအမှတ်ပြုချီးကျူးလို ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ၁၉၆၉ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ UNFPA အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဟာဆိုရင် နှစ် ၅၀ ပြည့်မြောက်တဲ့ နှစ်ပတ်လည်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ UNFPA အတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်ပတ်လည် ဖြစ်ပါ စေကြောင်းနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက သန်းပေါင်းများစွာသော အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလေးများနဲ့ လူငယ်များ အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ အရေးပါပြီး တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ အသက်ကယ်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို အောင်မြင်စွာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုပါတယ်။
ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးမင်းများခင်ဗျာ၊ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ ICPD လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် နှစ်မြှုပ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုချီးကျူးလိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုအများစုကို ဒုတိယသမ္မတရဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ ကြားသိကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ယခုနှစ် ဧပြီလက နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ လူဦးရေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မရှင်ရဲ့ ၅၂ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှာ ကျန်းမာရေး နဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်ထွေးပြေကြားခဲ့တဲ့ စကားတချို့ကို ကိုးကားတင်ပြလိုပါတယ်။ အဲဒါကတော့ –
“မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ICPD လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အစီအစဉ်ကို စတင်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကစလို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ၊ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ကတိ ကဝတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီလုပ်ငန်းအစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကို အလွန်ပဲ အလေးအနက်ထားပါတယ်။” လို့ ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (MSDP၊ ၂၀၁၈-၂၀၃၀) မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင် ရာနဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့၊ မိခင်သေဆုံးမှုတွေ လျှော့ချဖို့၊ မိသားစုစီမံကိန်းအစီအစဉ်တွေ အားကောင်းစေဖို့၊ ကျားမတန်းတူညီမျှမှုရရှိဖို့နဲ့ အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးဖို့၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ရပ်ရေးရွာရေးတွေမှာ လူငယ်တွေရဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို အားပေးမြှင့်တင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတဲ့ မဟာဗျူဟာတွေနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်း သိရှိမှတ်သားရပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကြား ကာလအတွင်းမှာ မိခင်သေဆုံးမှုနှုန်းကို အရှင်မွေး ၁၀၀,၀၀၀ မှာ ၄၅၀ ကျော်ရှိရာက ၂၈၂ လောက်အထိ လျှော့ချနိုင်ခဲ့သလိုမျိုး အဓိကညွှန်ကိန်းတစ်ချို့မှာ အောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေ ရှိခဲ့တာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ သတိပြုမိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ မိခင်သေဆုံးနှုန်းတွေဟာ စိတ်ပူ စရာ ကောင်းလောက်အောင် မြင့်မားနေသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိပြုကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ ချင်းပြည်နယ် မှာ မိခင်သေနှုန်း ၃၅၇၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာ ၃၅၄၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ ၃၄၄၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာ ၃၁၆၊ ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ ၃၁၄ တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးလက်နဲ့ မြို့ပြကြား မိခင်သေဆုံးနှုန်း ကွာဟမှုဟာလည်း အတန်ငယ်မြင့်မားနေ ပါတယ်။ မြို့ပြမှာ မိခင်သေဆုံးနှုန်းဟာ အရှင်မွေး ၁၀၀,၀၀၀ မှာ ၁၉၃ နဲ့ ကျေးလက်မှာ ၃၁၀ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်မှာ မိခင်သေဆုံးနှုန်း အရှင်မွေး ၁၀၀,၀၀၀ မှာ ၇၀ အောက်လျော့နည်းရေးဆိုတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ SDG ရည်မှန်းချက် ပြည့်မီရေးအတွက် စုပေါင်းကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
အဲဒီအပြင် မိသားစုစီမံကိန်း ၂၀၂၀ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပြုထားတဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး အတွက် UNFPA နဲ့ တခြားမိတ်ဖက်တွေရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်း အသိ အမှတ်ပြုလိုပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ အဓိကအားဖြင့် သားဆက်ခြားဆေးဝါးပစ္စည်းသုံးစွဲမှုနှုန်း(CPR) ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် မှာ ၄၁% ရှိရာကနေ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာ ၆၀% အထိ တိုးမြင့်လာဖို့၊ လိုအပ်နေတဲ့ မိသားစုစီမံကိန်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးရာမှာ ကွာဟချက်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာ ၁၀% အောက်အထိ ရောက်အောင် လျှော့ချဖို့ ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၊ ကုလသမဂ္ဂ၊ NGO တွေနဲ့ တခြားလုပ်ဆောင်သူတွေရဲ့ ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့် လက်ရှိအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ထက်ဝက်ဟာ မိသားစုစီမံကိန်းကို အသုံးပြုနေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း အမျိုးသမီးခြောက်ဦးမှာ တစ်ဦးကတော့ သားဆက်ခြားဆေးဝါးပစ္စည်းတွေ လိုအပ်နေပေမဲ့ ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ အမျိုးသမီးပေါင်း နှစ်သန်းကျော်နဲ့ သူတို့ရဲ့ အဖော်တွေဟာ မိသားစုစီမံကိန်းကို ချမှတ်ခွင့် ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးလိုပေမဲ့ မကျင့်သုံးနိုင်သေးဘူးလို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို မကျင့်သုံးနိုင် တဲ့အတွက် မရည်ရွယ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရရှိသွားတာတွေ၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ သားပျက်သားလျှောမှုတွေ၊ မိခင်နဲ့ ကလေး သေဆုံးမှု တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အမျိုးသမီးတွေကိုလည်း ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ အသက်မွေးမှုအလုပ်တွေမှာ ရွေးချယ်ခွင့်တွေ ကို အကန့်အသတ်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒုတိယသမ္မတနဲ့တကွ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်းများခင်ဗျာ ဒါဟာ ICPD နဲ့ SDG ပန်းတိုင်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ ပြုထားတဲ့ ကတိကဝတ်တွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်အကောင်အထည် ဖော်ရမယ့် မပြီးဆုံးသေးတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးနဲ့ ရပိုင်ခွင့်များအတွက် အမျိုးသားမူဝါဒတစ်ရပ်ကို ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအစီအစဉ်တွေ အကောင်အထည်ဖော်မှုကို ထပ်မံ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ အတွက် ဒီမူဝါဒကို မကြာမီမှာ အတည်ပြုလိမ့်မယ်လို့လည်း ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျားမတန်းတူညီမျှမှုနဲ့ အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုအပိုင်းမှာလည်း မြန်မာ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်း အမျိုး သမီးများရဲ့ ရပ်တည်မှုအဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ မူဝါဒတွေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ချမှတ်ကျင့်သုံးပြီး အားပေးပံ့ပိုးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ အစိုးရရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ အားထုတ်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အားပေးမြှင့်တင်ကာကွယ်ပေးပြီး အမျိုးသမီး တွေကို အရင်းအမြစ်တွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့ ရာထူးနေရာတွေမှာ ကိုယ်စားပြု ပါဝင်မှုတွေကို အမျိုးသားတွေနဲ့ တန်းတူညီမျှ လက်လှမ်းမီ ရရှိစေဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (NSPAW) (၂၀၁၃-၂၀၂၂) ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ သတိပြုမိပါတယ်။ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး (PoVAW) ဥပဒေကြမ်းကို ရေးဆွဲခဲ့ကြတာကိုလည်း တွေ့မြင်ကြရပြီး ဒီဥပဒေကြမ်းကို အမြန်ဆုံးအတည်ပြုနိုင်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ့် အချိန်ကို ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်စောင့်စားနေပါတယ်။
UNFPA နဲ့ တခြားမိတ်ဖက်တွေရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ အမျိုးသားလူငယ်မူဝါဒနဲ့ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရေးဆွဲထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အစိုးရကို ကျွန်တော်တို့ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုပါတယ်။ မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ ဆန္ဒတွေကို ဖြည့် ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဒီမူဝါဒနဲ့ စီမံကိန်းတွေကို အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဆန္ဒတွေအများအပြားထဲမှာ အထူးအားဖြင့် လူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေး၊ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး အပါ အဝင် ကျန်းမာရေး၊ သင့်တင့်တဲ့ အလုပ်အကိုင်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု အခွင့်အလမ်းတွေကို လက်လှမ်းမီမှု၊ ငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပါအဝင် အဓိကကျတဲ့ နိုင်ငံအဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတို့ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဧည့်သည်တော်ကြီးများခင်ဗျာ၊ ရှေ့ကို မျှော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ICPD ပန်းတိုင်တွေအပြင် SDG ပန်းတိုင်တွေနဲ့ ၂၀၃၀ လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ ပန်းတိုင်တွေ ပြည့်မီစေရေး အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ နဲ့ ဒီထက်အရှိန်တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လီဘာကို မလွတ်တမ်း ဆက်နင်းထားဖို့ လိုပါတယ်။ နေရာ ဒေသမရွေး၊ တခြားလူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ လက္ခဏာတွေ ဘယ်လိုပဲ ကွဲပြားပါစေ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း၊ မိန်းက လေးတိုင်းနဲ့ လူငယ်တိုင်းဟာ ပြည့်စုံတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေကို လက်လှမ်းမီ ရရှိနိုင်ဖို့၊ ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ဘယ်လိုအကြမ်းဖက်မှုပုံစံမျိုးမဆိုကနေ ကင်းဝေးစေဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကတိကဝတ်တွေ ထပ်မံပြုကြဖို့ လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်သည်တော်ကြီးများခင်ဗျာ၊ ဘယ်သူမှ နောက်မကျန်ခဲ့ရလေအောင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ရောက်ရှိဖို့ ခက်ခဲတဲ့၊ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် သဘာဝဘေးဒဏ်သင့်တဲ့ ဒေသတွေမှာ နေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ မိန်းကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေထံကို လက်လှမ်းမီနိုင်ဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပြီး သူတို့ကို ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အရေးကြီးတဲ့ နေရာတွေမှာ၊ ဥပမာ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ကြီးနဲ့ လားရှိုး)၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် (စစ်တွေနဲ့ မောင်းတော)၊ ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာ UNFPA ဟာ မဟာဗျူဟာကျကျ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရောက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် UNFPA အနေနဲ့ အကူအညီအလိုအပ်ဆုံးသောသူတွေ၊ နောက်ကျန်ခဲ့နိုင်တဲ့သူတွေဆီ ကမ်းလင့်ရောက်ရှိနိုင်အောင် မဖြစ်မနေ ကြိုးပမ်းသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဧည့်သည်တော်ကြီးများခင်ဗျာ၊ ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုက ရိုးစင်းပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ပိုင်ခွင့်၊ အကြမ်းဖက်မှုကနေ ကင်းဝေးစွာ နေထိုင်ခွင့် ရကြမယ်ဆိုရင် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အတွက် ပိုပြီး အထောက်အကူပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ စုံတွဲတွေဟာ မိသားစု စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုသာ လက်လှမ်းမီရကြမယ်ဆိုရင် ကလေးဘယ်နှယောက်ယူမယ်၊ ဘယ်တော့ယူမယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်သိတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တွေကို ပိုပြီးချမှတ်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိလူငယ်မျိုးဆက် သစ်တွေဟာ ကျန်းမာမယ်၊ ပညာကောင်းစွာ တတ်မြောက်မယ်၊ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေကို ရှာဖွေနိုင် ကြမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ လျှင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ လူတိုင်းရဲ့ ဘဝ ပိုမို သာယာဝပြောလာပြီး ဆင်းရဲမှုတွေ လျော့ကျလို့ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတွေလည်း တိုးပွားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဧည့်သည်တော်ကြီးများခင်ဗျာ၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ICPD ရဲ့ ၂၅ နှစ် ပြည့်မြောက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ဒီနှစ် နိုဝင်ဘာ လမှာ နိုင်ရိုဘီမှာ ညီလာခံတစ်ရပ် ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီညီလာခံကို အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ စေလွှတ်ဖို့အတွက် UNFPA က မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ ကျွန်တော် သိရှိထားပါတယ်။ နိုင်ရိုဘီမှာ ကျင်းပမယ့် ဒီညီလာခံမှာ နိုင်ငံအစိုးရတွေ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်တွေနဲ့ တခြားအကျိုးသက်ဆိုင်သူတွေဟာ ICPD လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်ရေးနဲ့ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်မှာ SDG ပန်းတိုင်များ ပြည့်မီရေးအတွက် သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အာသီသနဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်တွေ ထပ်လောင်းပြုကြပြီး တစ်ဖန် အားသစ်လောင်းကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့ အဲဒီညီလာခံကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အပြည့်အ၀ ကိုယ်စားပြုတက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒုတိယသမ္မတနဲ့တကွ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်းများခင်ဗျာ၊ နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးနဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူးအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်မှာ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်များ ရရှိရေးအတွက် ထက်သန်ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့အတူ ICPD ကို အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်ရေး ကတိကဝတ်များနဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအတွက် UN မှ ယိမ်းယိုင် သွေဖည်ခြင်းအလျဉ်းမရှိ ဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားဦးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ထပ်လောင်းအတည်ပြုပြောကြားလိုပါတယ်။
အာရုံစိုက်နားထောင်ပေးကြတဲ့အတွက် ဧည့်သည်တော်ကြီးများအားလုံးကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
Theme: 25 Years of the ICPD: Accelerating the Promise
· Vice President of the Republic of the Union of Myanmar, Your Excellency U Myint Swe
· Union Minister for the Ministry of Labour, Immigration and Population, Your Excellency U Thein Swe
· Excellencies Honourable Union Ministers
· The UNFPA Representative, Mr. Ramanathan Balakrishnan
· Colleagues from the UN
· Development Partners
That human-centric approach to development, as pioneered by the ICPD, has lived on in subsequent international development agendas including the Millennium Development Goals (MDGs) and the Sustainable Development Goal (SDGs). You will appreciate, Excellencies, Ladies and Gentlemen, that the ICPD Programme of Action and the Sustainable Development Goals are two mutually reinforcing development blueprints. In the words of Crown Princess of Denmarkafew weeks ago: “the ICPD is the cornerstone of the sexual and reproductive rights movement, and protecting sexual and reproductive health and rights, women’s empowerment and gender equality are all essential if we are to have any chance of achieving the ambitious Sustainable Development Goals by 2030.”
Excellencies, Ladies and Gentlemen, let me at this juncture recognise the important role of UNFPA as the custodian of the ICPD both at the global level and at country level in Myanmar. Incidentally, 2019 also marks the 50th anniversary of the establishment of UNFPA in 1969. We say Happy 50thBirthday to UNFPA and we wish the organisation every success in the important and valuable life-saving work it renders to millions of women, girls and young people around the world, and in Myanmar.
Looking ahead, Excellencies, Ladies and Gentlemen, we need to keep our foot on the gas pedal in order to sustain and accelerate the momentum for attaining the goals of the ICPD and, by extension, the SDGs and the 2030 Agenda. We need to renew our commitment to ensuring that every woman, girl and young person in Myanmar, regardless of geographical location or other socio-economic characteristics, is able to access comprehensive sexual reproductive health services; and that they are free from gender based violence and any other forms of violence. If we are to leave no one behind, Excellencies, Ladies and Gentlemen, we need to be able to access those women, girls and young people living in difficult to reach, conflict or disaster hit areas of the country, and offer them services that would enable them to livealife of dignity. With UNFPAs strategic physical presence in some of the critical locations such Shan (Taunggyi and Lashio), Kachin, Rakhine (Sittwe and Maungtaw) and Kayin States, it is imperative that the organisation is enabled to reach the most in need and those likely to be left behind.
The logic is simple, Your Excellecies, Ladies and Gentlemen, if women and girls are empowered to make decisions about their bodies and to live free from violence, they are more likely to contribute to the economy. If couples have access to family planning information and services and good reproductive healthcare, they are more likely to make responsible decisions about how many children to have and when. If, on top of all that, this young generation in Myanmar is healthy, well-educated and able to find decent employment, then Myanmar will achieve quick development. This then impliesabetter life for everyone, as well as less poverty and increased chances for lasting peace.
← THE SECRETARY-GENERAL MESSAGE ON WORLD POPULATION DAY, 11 July 2019 Communication to the press after the official visit of the UN Special Envoy of the Secretary General on Myanmar, Christine Schraner-Burgener, to Myanmar from 09.-18.07.2019 →